चिनियाँ राष्ट्रपतिको त्यो फोन जसले गलायो ओली र प्रचण्डलाई…हेर्नुहोस!
काठमाडौ । सत्तारूढ दल नेकपाको वि,वादले गत हप्ता ठूलो हलचल मच्चाएको थियो । जब बामदेवले प्रचण्ड र माधव नेपालको साथ छोडेर प्रधानमन्त्री तर्फ मोडिए, नेकपा वि,वाद सामसुम भयो । तर के साँच्चै बामदेवलाई प्रतिनिधि सभा लाने नि,र्णयले त्यो वि,वाद सु,ल्झियो वा अरु कुनै फ्याक्टरले समेत काम गरेको थियो ?
प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको रा,जिनामा माग्ने नि,र्णयमा अ,डिग रहने गरि शनिवारको बैठकलाई कुरिरहेका थिए । प्रचण्ड त झन् क,डिकडाउका साथ पेश हुने योजना बनाएका थिए ।
केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको पदबाट रा,जिनामा दिन लाउने तयारीका साथ आफूले राख्ने कुराको तयारी गरेका थिए जुन कुरा माधव नेपाललाई समेत थाहा थियो । तर एकाएक प्रचण्ड बैठकमा चु,पचाप रहंदा नेता नेपाल अ,चम्मित भएका थिए ।
जन आस्था पत्रिकाको अनलाईन सं,स्करणमा प्रकाशित समाचार अनुसार यो वि,वाद सुल्झाउन चिनियाँ राष्ट्रपतिको फोनकलले ठूलो भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले चिनियाँ रा,जदूत होउको उपस्थितिमा राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीसंग फोनवार्ता गरे पश्चात प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड गलेको बुझिएको छ ।
प्रचण्डले घरिघरि रा,जिनामा माग्नेदेखि बामदेव गौतमलाई संसदमा लाने योजना बनाई रहंदा प्रधानमन्त्री ओली समेत कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए ।प्रधानमन्त्री बामदेव हुने भए र अध्यक्षमा माधव नेपाल हुने भए प्रधानमन्त्री ओलीले रा,जिनामा दिन्छु भन्ने प्रश्ताव समेत राखेका थिए जसले प्रचण्डलाई ध,क्का समेत पुगेको थियो ।
आफू एकल अध्यक्ष बन्ने चाहना बालुवाटार बाहिर प्रचण्डले प्र,कट गरेका थिए जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीसंग केहि समय देखि प्रचण्डको सम्बन्ध सुमधुर थिएन जसले नेकपाको वि,वाद बढ्दै गएको थियो । जब प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यादेश एकाएक जारी गरे, नेकपा भित्र केपी ओली वि,रुद्दको माहोल नै सिर्जना भयो जसले नेकपाको वि,वाद च,र्कियो ।
शनिबार सचिवालय बैठक शुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अ,कस्मात बालुवाटारबाट निस्केर शीतल निवास पुगे । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई भनिन्, “जे-जे क,मि भए । जानेर भए,नजानेर भए- जसरी भएका भए पनि क,मजोरीलाई क,मजोरी नै भन्नुस् ।
आ,त्मालोचना गर्नुस् । तर, अहिले ‘हार्ड एण्ड फास्ट’ भएर जाने छुट न तपाईंलाई छ, न अरुलाई नै !” राष्ट्रपति भण्डारीसंग चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ्गको राजदूत होउको उपस्थितिमा फोनवार्ता भएको थियो ।
त्यहि फोनवार्ताको सार अनुसार राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनिन्, “आफ्नै साथीहरुसङ्ग भि,डेरै जान्छु भन्नेतिर जानु हुँदैन । उहाँहरूले उठाएका विधि-पद्धतिका कुरालाई पनि सानो कुरा नमान्नुस् ।
यसरी बैठकमा प्रस्तुत हुनुभयो भने आन्तरिक एकता नै सुदृढ हुने हो ।”नेकपाको वि,वाद उत्कर्शमा पुगेको बेला राजदूत होउले राष्ट्रपतिसँग भेट्नुअघि सारा वस्तुस्थितिको सुक्ष्म अध्ययन गरिसकेकी थिइन् ।
यसैबमोजिम “एकताबध्द नेकपा:आजको आवश्यकता “भन्ने सन्देश राष्ट्रपतिमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याएको र, प्रधानमन्त्रीमार्फत यही कुरा प्रचण्डलाई रिले गरिएको अनुमान छ ।
नत्र,निकै क,डिकडाउ पेश हुने योजनासाथ हिजो बैठकमा छिरेका प्रचण्ड चुपचाप रहनुमा सबै अचम्मित छन् ।